यद्यपि राईओ अन्य प्रकारका बिरुवाहरू भन्दा तुलनात्मक छ - अनौठो फूल, तर यसको उत्पत्ति र सजावटमा सुधार गर्न यसको लागि हेरचाहको सरल नियमहरू पछ्याउन आवश्यक छ। यो सधै यो अद्भुत संयम को गर्मी-मायालु प्रकृति को सम्झना छ, जो कम तापमान (10 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल) को सहनशीलता को सहन गर्छन र ड्राफ्ट बर्बाद गर्दैन। यो लेख र यसका थुप्रै अन्य विशेषताहरू यस लेखमा समावेश गरिनेछ।
Rheo फूल: वर्णन
रेको सबै ज्ञात ट्रेससिंटियाको रिश्तेलाई मानिन्छ। यो वास्तव मा Tradescantia र Zebrin (परिवार comnelins को प्रकार) को संदर्भित गर्दछ, तर केहि वनस्पतिज्ञहरूले विश्वास गर्छन् कि यो बिरुवा एक अलग जीनस - रे।
यो फूलको जन्मस्थान दक्षिण र मध्य अमेरिका हो। त्यहाँ यो नदीको किनारमा, चट्टानहरूमा र उष्णकटिबंधीय जंगलहरूमा (फ्रिङ्गहरूमा) भेटिन्छ, जुन यसले हेरचाह गर्न असम्भव छ। साथै यो रोपण अक्सर एन्टिलेस, म्याक्सिको र फ्लोरिडामा भेट्टाउन सकिन्छ।
री र एक हेबैसिस बिरुवा मूल र असामान्य बहु-पनी पत्ते भएका छन्: बैंगनी-बैंगनीबाट बिरुवाको निचो भागमा, हरियो भागमा - माथिल्लो भागमा। पातहरूको लम्बाई 30 सेन्टिमिटर हुन्छ।
फूलहरु (फोटो) को विशेषताहरु को विशेषताहरु छ?
उनको हेरचाह, माथि उल्लेखित रूपमा, धेरै प्रयासको आवश्यकता पर्दैन। त्यसोभए, उहाँ अक्सर कार्यालय र अपार्टमेन्टको निवासी हुनुहुन्छ।
Rheo को लागि, एक राम्रो बत्ती, तर सूर्य को सीधा किरणहरूबाट छायांकित स्थान उपयुक्त छ। गर्मीमा, कोठाको पूर्वी वा पश्चिमी भागमा एक फूल बर्तन अधिवेशनमा खिचिएको हुनुपर्छ र सिजन सिजनमा - दक्षिणीमा। तथ्य यो छ कि रियो एक फूल हो, जुन, अपर्याप्त रोशनी हुन्छ जब फैलाउँछ, जब पत्तियां फलक बदलिन्छ र उनको आकर्षण गुमाउँछ।
गर्मीमा फूलको लागि अधिकतम तापमान 20 देखि 24 डिग्री सम्म हुन्छ, र सर्दमा - 16 भन्दा कम छैन। यो फूल शिमका लागि एक धेरै आवश्यक छ। रे र तापमान र ड्राफ्टहरूमा अचानक परिवर्तनहरू मनपर्दैन।
यसले उर्लिरहेको प्रकाशलाई राम्रोसँग प्रतिक्रिया गर्दछ (हरेक 14 दिनमा एक पटक)। यसो गर्न, तपाइँ खनिजहरूसँग एक जटिल उर्वर प्रयोग गर्न आवश्यक छ, विशेष गरी सजावटी र परिष्कृत फूलहरूको लागि डिजाइन गरिएको। फूलको लोश नियमित रूपमा मुख्य गोलीको शीर्षमा चिनो लगाउन सकिन्छ।
Rheo को लागि गृह हेरविचार
इनडोर फूल, यसको असामान्य उपस्थितिको कारणले अर्को रोचक नाम छ - "मोशालाई टोकरीमा"। यस बिरुवाको विशिष्टता यसको लामो पितृको रंगमा र फ्लोरोसेन्सको रूपमा हुन्छ।
रेवो एक संयंत्र जस्तै धेरै प्रभावशाली र मूल देखिन्छ, जसको लागि यो यसको पार्श्व गोली हटाउनु आवश्यक छ। पछि प्रजननको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरू वर्षको वसन्त र ग्रीष्मकालीन अवधिहरूमा राम्रोसँग जडित छन्। झाडी एक स्प्रिन्डर दिन, यो बढ्दो मौका दिन आवश्यक छ।
उचित हेरचाह संग, फूल को कोठा को डिजाइन को लागि अद्भुत जीवित अतिरिक्त हुन सक्छ। राई (फूल) को कोठा मा कस्तो देखिन्छ? तस्विर तल प्रस्तुत गरिएको छ।
वसन्त र गर्मीमा यो आवश्यक यो पोल पानीको लागि आवश्यक छ, बर्तन मा पानी ठहराव को गठन को अनुमति छैन। जाडो र शरद ऋतुमा हल्का जलविद्युत् (माटोको सतह सुक्ने2दिन पछि) मा मध्यम गीले राज्यमा माटोलाई समर्थन गर्न अनुमति दिन्छ।
निचो पातहरू र गरिब वृद्धि घट्दै अत्यधिक पानीको लक्षणहरू हुन्। बिरुवामा धेरै सानो पातहरु, यसको विपरीत, नमी को कमी को बोल्छ।
फूल पुन: घरको अवस्था धेरै राम्रोसँग सहन सक्छ। धेरै बिरुवाहरु को लागि, कोठा को तापमान मा फूल को आवधिक छिड़काव धेरै उपयोगी छ । यदि हावा धेरै सुत्ने छ भने, पातहरु को सुझावहरु ब्राउनशश हुन सक्छ।
सम्पूर्ण रूपमा, फूल रियो (तस्बिर) घरमा धेरै सुन्दर छ। उनको हेरविचार सरल छ, र प्रत्यारोपणले कठिनाइहरूको कारण गर्दैन।
वसन्त अवधि फूल प्रत्यारोपणको लागि उत्तम समय हो। यो बिरुवाको मूल प्रणालीको चौडाईमा वृद्धिको लागि पोटहरू आवश्यक छ। ट्यांकको तलतिर, विस्तारित माटो वा अन्य सामग्री को तह राख्नु आवश्यक छ, किनकि ठुलो पानी बिरुवामा हानिकारक छ।
बिरुवाको लागि एक सब्सट्रेट यसको आफ्नै स्रोत र बलहरूसँग सिर्जना गर्न सकिन्छ। राईको लागि उत्तम मिट्टी मिश्रण निम्न घटक हुन् (सबै एक टुक्रामा):
• पातको जमीन;
• हास्य संग भूमि;
• भूमि ठुलो छ;
रिओ एक फूल हो जुन वर्षको कुनै पनि समयमा प्रचार गर्न सकिन्छ। यो आवश्यक छ कि कुनै पनि कटाईहरू काट्न र अलग कन्टेनरहरूमा तिनीहरूलाई रोप्नुहोस्।
नंगे तलका ढोकाको साथ एक पुरानो फूलले पत्थरबाट माथिको भाग अलग गर्नुपर्छ र यसलाई स्टङ्कको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ। यो कायाकल्प लगभग चार वर्षमा एक चोटि गर्नु पर्छ।
तपाईं प्रचार र बीउ गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू पेटी-स्यान्डी माटो सँग बक्सहरूमा बोकाइन्छन्। सबैभन्दा उपयुक्त अवधि अप्रिल हो।
पातका पङ्क्तिहरू घटेका छन्, पातहरू झैं र सुकिन्छन् - पानीको कमी वा चिसो पानीको साथ पानी।
पेसा पत्तियां भिटामिन र प्रकाशको कमी हो।
पत्तियां मा बर्न - सूर्य को सीधा किरणों को प्रभाव।
निचो पातहरू घटाउँछन्, रोप्न बढ्छ - सिंचाईको अनावश्यकता।
बिरुवाको पातको रङ्ग, पत्तियां फीका - प्रकाशको कमी।
छोडिदिन्छ र कोठामा हावाको ठुलो तापमान र सुस्त र नरम बन्छ।
रे फेंग शुई द्वारा
पुरातन पूर्वी सधैँ शिक्षणको लागि प्रसिद्ध छ, जसको लागि मान्छे आफैं र भित्ता पूर्णतया संग सम्भव हुन सक्छ।
कोठामा वायुमण्डल सामान्यतया गर्न सञ्झ्यालहरूमा बिरुवामा बिरुवाहरू मद्दत गर्नुहोस्। तिनीहरू बाह्य नकारात्मकताबाट एक प्रकारको सुरक्षा सिर्जना गर्छन्। तर बिरुवाहरू आफैं पनि स्वस्थ हुनु पर्छ, किनकि बिरामी फूलहरूले प्रतिकूल ऊर्जा पाउन सक्छन्।
फूल रहूले आक्रामकता, रिस, कसैलाई लुकाउन सक्छ। यो संयंत्रले सजिलै संग घरमा कुनै पनि तनाव हटाउँछ र बायोफिल्ड त्यही मात्रामा राख्छ। रक्त वाहिकाहरुमा लाभकारी प्रभाव एक व्यक्ति को समग्र सकारात्मक अवस्था मा योगदान गर्दछ।
यसकारण, साधारण घरको अवस्थामा रियोको हेरचाह पर्याप्त छ, तपाईले माथि उल्लिखित सरल सिफारिशहरू पछ्याउनु पर्छ, र रोपणले कोठालाई आकर्षक सजावटी उपस्थिति संग सजावट गर्नेछ र मालिकहरूलाई उनीहरूको राम्रो ऊर्जाको फाइदा ल्याउनेछ।
स्क्वैश (कद्दू) - सबैभन्दा स्वादिष्ट कद्दी: बढ्दो। शरीरको लागि कसरी उपयोगी कद्दिन
उच्च उपज आलु। डच प्रविधिको खेती
घर मा रक्सी कसरी सफा गर्ने? शुद्धीकरण प्रक्रिया घरमा रक्सी
Pram "1 मा Dsland 2": विवरण, समीक्षा
म एक कुकुर को ऊन थियो। के गर्ने?
Android को लागि Terraria मा आईडी वस्तुहरू